We.com.mm - Phobia ဆိုတဲ့ ကြောက်ရွံခြင်း အမျိုးမျိုးစာရင်းထဲမှာ သင်ကရောဘယ်လိုအရာကိုကြောက်ရွံ့ပါသလဲ ?
Phobia ဆိုတဲ့ စာလုံးဟာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးစစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူး …။ ရှေးခေတ်ဂရိဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Phobos ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မွေးစားထားတာဖြစ်တယ် …။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ကြောက်ရွံ့ခြင်းပေါ့ …။
ကြောက်ရွံ့တယ် ဆိုတာလည်း အမျိုးမျိုးရှိသား ..။
တစ်ချို့က အမြင့်ကြောက်တယ် ..။ တစ်ချို့ကရေကြောက်တယ်။ တစ်ချို့က တိရစ္ဆာန်တွေကို ကြောက်တယ်။ တစ်ချို့က လူအချင်းချင်းကို ပြန်ကြောက်တယ် …။
ပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆို ကြောက်သင့်တဲ့အရာကို ကြောက်တာဟာ မထူးဆန်းပေမယ့်၊ ကြောက်ရမယ့်ဟာ မဟုတ်တာတွေကို မတရားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတာဟာ စိတ်ရောဂါတစ်ခုသာ ဖြစ်တယ် …။
ကြောက်ရွွံ့ခြင်းတွေ ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ ..? ကြည့်ရအောင် …။
( ၁ ) Ablutophobia
ရေကြောက်တဲ့သူ ပေါ့ …။ ရေထဲမဆင်းရဲအောင် ကြောက်တာတင်မဟုတ်ပဲ ရေချိုးရမှာ၊ ရေနဲ့ထိရမှာ၊ ရေကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဆေးကြောရမှာ ကြောက်တာဖြစ်တယ် ..။ ဒါပေမယ့် ရေကိုတော့ မသောက်ပဲဘယ်နေနိုင်လိမ့်မလဲ ?
( ၂ ) Acousticouphobia
အော်ကက်စထရာ လို့ခေါ်တဲ့တီးဝိုင်းတွေကနေစလို့၊ ဟိုး EDM Festival တွေအထိ ဆူညံ ပွက်လောရိုက်နေတဲ့ အသံဗလံတွေကို ကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ် …။
( ၃ ) Acrophobia
အမြင့်ကြောက်တဲ့သူပါ …။ ဥပမာ အမြင့်ကိုရောက်လာလေလေ၊ ဒူးတွေတုန်လာလေလေ၊ အမြင့်ကနေ အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ ဖင်တစ်ခုလုံး ကျိန်းသွားသလို၊ ခေါင်းတစ်ခုလုံး ကြီးသွားသလိုလို၊ ကြက်သီးတွေထလာသလို ခံစားရတာမျိုး …။
( ၄ ) Aerophobia
လေထဲမှာ ပျံသန်းရတာကို ကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ် …။ လေယာဉ်စီးတာတင်မဟုတ်ပဲ .. Merry Go Round လို့ခေါ်တဲ့ ချားရဟတ်သေးသေးလေးတွေ၊ ရဟတ်အကြီးကြီးတွေ၊ နောက်ပြီး ရိုလာကိုစတာ စီးတာတွေအထိပါ ကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ် …..။
( ၅ ) Agoraphobia
မြက်ခင်းပြင်စိမ်းစိမ်းကြီးနဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကို တစ်ဆက်တည်းမြင်နေရတာမျိုးကို ကြောက်တဲ့သူတွေ။ နောက်ပြီး ကောင်းကင်ပြာပြာကြီး ကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဟင်းလင်းပြင်ထဲရောက်သွားသလို ခံစားမှုမျိုးကို ကြောက်တာဖြစ်တယ် ..။ ပြောရရင်တော့ Open Places လို့ခေါ်တဲ့ ကျယ်ပြောတဲ့၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့၊ လူရှေ့သူရှေ့ထွက်ရမယ့် နေရာတွေကို ကြောက်တာဖြစ်တယ် ….။
( ၆ ) Agyrophobia
လမ်းသွယ်တွေ၊ လမ်းဆုံလမ်းခွတွေ ကိုကြောက်တာပါ …။
( ၇ ) Aichmophobia
ကလောင်တံထိပ်ဖျား၊ ဘောပင်ထိပ်၊ ပင်အပ်ထိပ်ဖျား၊ ဓားဦးချွန်ထိပ်ဖျားနဲ့ သံချွန်ထိပ်ဖျားတွေကို ကြောက်တာဖြစ်တယ် …။
( ၈ ) Algophobia
နာကျင်ရမှာကို ကြောက်တာမျိုး …။ ကိုယ့်အသားကို လက်နဲ့ဆိတ်လို့ နာသွားမှာကိုတောင် ကြောက်နေတာ မျိုးပေါ့ ….။
( ၉ ) Ailurophobia
ကြောင်မှန်သမျှ သေးသေးရော၊ ကြီးကြီးရော .. ကြောင်ဆိုတာနဲ့ ဘယ်ကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြောက်ရွံ့နေတာ ဖြစ်တယ် ….။
( ၁၀ ) Amychophobia
အကုတ်ခံရမှာကြောက်တာဖြစ်တယ်။ Algophobia နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့လိုမျိုး တစ်ချိန်လုံး နာကျင်မှာကို တွေးကြောက်နေတာမဟုတ်ပဲ၊ ကိုယ့်အသားကို ကုတ်ဆွဲခံရနိုင်တဲ့ အခြေအနေကျမှ ကြောက်ရွံ့ကြတာဖြစ်တယ် …။
( ၁၁ ) Androphobia
အသက် ၁၈ နှစ်ကနေစလို့ အရွယ်ရောက်ပြီး ယောကျ်ားတွေကို ကြောက်ရွံ့တာပါ …။ ကိုယ်ကြွေနေတဲ့ Crush က Secret Androphobian ဆိုရင်တော့ ဂွမ်းပြီပေါ့ ….။
( ၁၂ ) Anthropophobia
လူတွေကို ကြောက်တာပါ …။ လူတွေဆိုပေမယ့် လူတိုင်း၊လူတိုင်းကို မဟုတ်ပဲ ကိုယ်ကျင်လည်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ စပ်ဆက် အသိုင်းအဝိုင်း က လူတွေကို ကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ် ….။
( ၁၃ ) Aquaphobia
ရေကြောက်တာပါ။ တစ်ခုရှိတာက အပေါ်ဆုံးမှာပြောခဲ့သလို၊ ရေနဲ့ထိရမှာ၊ ရေချိုးရမှာ ကြောက်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ …၊ ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ရေအောက်က သတ္တဝါတွေကို မှန်းဆပြီး ကြောက်ရွံ့တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ် ….။
( ၁၄ ) Arachnophobia
ပင့်ကူတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ …။
( ၁၅ ) Astraphobia
မိုးကြိုးပစ်၊ လျှပ်စီးလက်တာ ကိုကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ်။(တော်တော်များများလည်းကြောက်ကြပါတယ် )
( ၁၆ ) Basophobia
အမြင့်ကနေ တလိမ့်ခေါက်ကွေးကျမှာကို ကြောက်တာ ….။
( ၁၇ ) Claustrophobia
လှောင်ပိတ်ခံရမှာကို ကြောက်ရွံ့တာ …။ ဥပမာ ဓာတ်လှေကားထဲမှာ ပိတ်မိတာမျိုး ..။ အခန်းတံခါးဖွင့်မရတာမျိုး ..။ အိမ်သာ တံခါးလော့ခ်ကျသွားတာမျိုး …။
( ၁၈ ) Coimetrophobia
သင်္ချိုင်းကုန်းတွေ၊ သုသာန်တွေကို ကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ် …။
( ၁၉ ) Colorphobia
ထူးထူးဆန်းဆန်းပါ …။ အရောင်တွေကို ကြောက်ရွံ့တာပေါ့ …။
( ၂၀ ) Coprophobia
မစင်နဲ့ အီအီးပုံတွေကိုကြောက်တာ။ ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်တာပဲလေ ..။ ( တက်နင်းမိမှာကိုပေါ့ )
( ၂၁ ) Coulrophobia
လူပြက် တွေကိုကြောက်ရွံ့တာ ..။ အငြိမ့်ကတဲ့လူပြက်တွေကို မဆိုလိုဘူး ..။ ဂျိုကာပုံစံဝတ်ထားတဲ့ လူပြက်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ် ..။ အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် “ IT “ သရဲကား ထဲက ပင်နီဝိုက်စ် ဂျိုကာလိုမျိုး …။
( ၂၂ ) Cyberphobia
ကွန်ပျုတာနဲ့ တခြား အိုင်တီ ပစ္စည်းတွေကို ထိတွေ့၊ ကိုင်တွယ်ရမှာကိုကြောက်တာ …။ နောက်ပြီး နည်းပညာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သင်ယူလေ့လာမှုတွေကို ကြောက်ရွံ့တာ …။
( ၂၃ ) Cynophobia
( ၂၄ ) Demonophobia
သရဲ၊တစ္ဆေ နဲ့ မိစ္ဆာ တွေ၊ အောက်လမ်းဆန်ဆန် အစီအရင်တွေကို ကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ် …။
( ၂၅ ) Dentophobia
ကလေးသူငယ်တွေအဖြစ်များကြတယ် …။ သွားဆရာဝန်တွေကို ကြောက်တာ ..။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က သွားဆေးခန်းသွားတဲ့အခါ ဆရာဝန်ကြောင့် နာကျင်သွားရပြီဆိုရင် သူမှမဟုတ်ဘူး ..။ ဘယ် သွားဆရာဝန် ဆီကိုမှသွားချင်စိတ်မရှိတော့တာ …။ ကြီးလာတော့ အဲဒီကြောက်စိတ်မရှိတော့ဘူး ..။ ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးတဲ့အထိ သွားဆရာဝန်ဆီသွားရမှာ ကြောက်နေတဲ့သူတွေကတော့ Dentophobian တွေဖြစ်ပါတယ် …။
( ၂၆ ) Erotophobia
လိင်မှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ စာအုပ်တွေနဲ့ နောက်ဆုံး လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုရမှာကိုပါ ကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ် …။
( ၂၇ ) Ematophobia
( ၂၈ ) Gelotophobia
ရယ်ရမှာ ...၊ ရယ်မောခံရမှာကို ကြောက်တာပါ ...။
( ၂၉ ) Glossophobia
စကားပြောရမှာကိုကြောက်တာ …။ လူရှေ့သူရှေ့မှမဟုတ် ..၊ နှစ်ကိုယ်ကြား ပြောရမှာကိုလည်း ကြောက်ရွံ့ နေတာကို ဆိုလိုပါတယ် …။
( ၃၀ ) Gymnophobia
ကိုယ်လုံးတီး တွေကိုကြောက်တာ …။
( ၃၁ ) Gynophobia
မိန်းမတွေ၊ အမျိုးသမီး တွေကိုကြောက်ရွံ့တာပါ …။
( ၃၂ ) Heliophobia
နေရောင် ( ဒါမှမဟုတ် ) နေရောင်နဲ့ထိတွေ့ခံရမှာကိုကြောက်တာ …။ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်လိုမျိုးပေါ့ …။
( ၃၃ ) Lilapsophobia
မုန်တိုင်းတွေကို ကြောက်တာ ….။ ( မုန်တိုင်းမကြောက်တဲ့သူတော့မရှိဘူးထင်ပါတယ် )
( ၃၄ ) Myrmecophobia
ပုရွက်ဆိတ်တွေ၊ ပုရွက်ပျံတွေကို ကြောက်တာဖြစ်တယ် …။
( ၃၅ ) Phagophobia
ဝါးစားရမှာကိုကြောက်တာ …။ အဲတော့ အကောင်လိုက်၊ အလုံးလိုက် မျိုချပေါ့ …။
မနက်စာ လုံးဝမစားတဲ့သူရဲ့ ဖြစ်ရပ် (သတိထားကြပါ)
ခေတ်စားနေတဲ့ Mason Gift Jar လေးနဲ့ ချစ်ခင်သူတွေကို လက်ဆောင်ပေးရအောင်…။
မန်ကျည်းသီး နဲ့ အလှအပရေးရာ
ပန်းရောင်ရေကန် (ခ) Lac Rose
တစ်ဧကစိုက်ပျိုးရင် သိန်းထောင်ဂဏန်းလောက်ရတဲ့ လီလီပန်း (Lily Flower ) စိုက်ပျိုးနည်း
ဥတွေအခွဲခံလိုက်ရတာကြောင့် ရင်ကွဲနာကျပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ မိခင်ဘဲငန်းမကြီး